Imibuzo evame ukubuzwa - Yueqing Longcheng Electric Co., Ltd.
Adjustable yamanje Circuit Breaker
Nokufaka Futhi Ukubhoboza Ngocingo
Mayelana nemikhiqizo yesithombe
Zonke izithombe ezikule webhusayithi zithathwe ngomusa. Ngenxa yokukhanya okuhlukile nokubonisa, kuzoba nomehluko wombala ezithombeni. Sicela ukhethe ngokucophelela uma ungeke wamukele umehluko wombala, futhi ungawuthathi njengesizathu sokubuya.
Mayelana nesikhathi sokuthumela
Uma uthola idiphozi ejwayelekile ngezinsuku eziyi-7 ukulethwa, kepha kuya ngobuningi be-oda.
Mayelana nenkampani yokuhambisa nokuthumela kanye namasampula
I-Express qala ngokukhetha i-DHL, i-FEDEX, i-UPS njalonjalo, Futhi ngolwandle inkampani ejwayelekile yokusebenzisa i-MSK, Kwamasampuli singakhulula ama-1-2Pcs kepha amakhasimende adinga ukukhokha imithwalo yemikhumbi
Cishe ngemuva kokuthengisa
Uma uhlangabezana nezinkinga ekufakweni nasekusebenziseni, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi, sikulungele ukunikeza ukuholwa nguchwepheshe.
Mayelana nokubuya nokushintshaniswa
Uma umkhiqizo uyinkinga yekhwalithi ngempela, sicela uxhumane nathi nganoma yisiphi isikhathi, sizobhekana nawe okokuqala, futhi sizobuyisa imali yezimpahla
1. Ngaphambi kokuthengisa, sizophendula imibuzo yakho ngesimo esifudumele nangolwazi lobuchwepheshe. Uma kunesidingo, sizokunikeza isampula yokuqinisekisa. Ngesikhathi esifanayo, sikwamukela ngokufudumele ukuba uvakashele imboni yethu.
2. Ngemuva kokuqinisekisa inhloso yokubambisana, singasayina inkontileka yokuthengisa ukunikeza ukuvikelwa okungokomthetho.
3. Izindlela zokukhokha eziguqukayo: I-Western Union noma i-akhawunti yenkampani, ukudluliswa kwangasese, njll.
4. Intengo yomkhiqizo eku-inthanethi ingeyenkomba kuphela. Ngenxa yezinguquko ezingaguquki zezinto zokusetshenziswa nezindleko zabasebenzi, amanani entengo yomkhiqizo ayashintshashintsha ngezikhathi ezithile. Yonke imikhiqizo ingaphansi kokuxoxisana
Ikheli: Jingyang Road, Liushi Idolobha, Yueqing Idolobha, Zhejiang, China
Ucingo: 0086 15067740790